Mashiinka suuqa kala Aluminum
Mashiinka crimping Corner
mishiinka axdi qarameedka End
mashiinada shirka profile aluminium fasax kaamerada
Arc mashiinka laabaya
mishiinka qodista dunmiiqa Multi
Mashiinka suuqa kala Upvc
Mashiinka nadiifinta Corner
mishiinka axdi qarameedka
Steel mashiinka maroojin xoojinta
Qalabada line-soo-saarka galaas
Maxaa Waxaan Bixiya
wax soo saarka ugu sareeya iibinta
Cuntooyinkan waxaa badanaa loo isticmaalaa saarta aluminium iyo upvc dariishadaha iyo albaabada, qalabada dhalooyinka iyo beeraha kale ee la xiriira ee aluminium iyo profile upvc, sida beer jiilaalka, guriga cagaaran, derbiga daah, aluminium warshadaha profile goynta iyo axdi qarameedka, iyo iwm
Waayo, faham wanaagsan ee alaabta iyo qiimaha our, pleace click on badhanka midigta in ay soo gudbiyaan macluumaadka, waxaan u jawaabi doonaa in aad 24 saac gudahood.
PCV jir suuqa kala V goynta uruursanayey miinshaar
Vertical afar cormers Mashiinka alxanka automatic
JINAN HAIJINNA CNC mishiino CO., LTD. waxa uu isku dayayaa in uu noqdo naqshadeeye xirfadeed oo fiican iyo soo saaraha ee suuqa iyo mashiinka qaadashada albaabka sida Aluminum, suuqa kala UPVC iyo albaabka, derbiga daah iyo qalabada qalabka galaas samaynta, noocyada kala qaybinta ee xalka si aad u hesho codsiga kala duwan.
Advance leh wakhtiyada, diiradda shirkadda on cilmi-baarista iyo horumarinta ee alaabta oo dhan, adeegga kartoo sahayda, oo na dhigay nidaamka tayada heli karaa iyo adeeg-iib aheyn ka dib kaamil ah. Iyada oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo, Hisena ayaa noqonaya brand sare iyo soo saaraha ugu horeeysa ee Shiinaha haatan.
mashiinada Window saaraha
© Copyright - 2010-2019: Rights Reserved All. Hot Products - Sitemap - amp Mobile
Hal Madax oo Upvc Mashiinka Alxan la'aanta , Portable Upvc Corner Cleaning Machine , Glass Glaze kuusha arkay Jarida ,
Mashiinno dhameystiran oo lagu sameeyo upvc ...
Mashiino noocee ah ayaa looga baahan yahay samaynta alum...
Dongzhao Industrial zone, magaalada Puji, zhangqiu, Jinan City, Gobolka Shandong, CHINA.250200